Ruler : Master of the Mask ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
2017 ထဲမှာ အ hot ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက တစ်ခုလို့ ပြောရလောက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် … MBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ တခြား Korea Historical Drama တွေ Historical ကို ရှေးခေတ်မှာ ပြန်ရိုက်ပြလို့သာ ထည့်လိုက်ရတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ အရင်က MWD , MRTV တို့မှာ ပြနေကြ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေလိုမျိုး နန်းတွင်းအရှုပ်အရှင်းများကိုမှ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်အကြိုက် Romance အနည်းငယ်ဖြင့် အချိုးကျ ဖန်တီးထားတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် …
ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ Main Actor တွေ အဖြစ် နာမည်ကြီး မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တယ် Yoo Seung-Ho နှင့် KPop Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ infinite အဖွဲ့မှ L တို့က ပါဝင်ထားပြီးဘMain Actress တွေ အဖြစ် Let’s Fight Ghost ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ လူသိများလာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး Kim So-Hyun နှင့် နောက်ထပ် မင်းသမီးချောလေး Yoon So-Hee တို့က ပါဝင်ထားပါတယ် …
၁၇၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဖြောင်းဆိုး လို့ အမည်ရတဲ့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်မှာ ဘုရင်တွေကိုပဲ လက်အောက်ခံအဖြစ် သိမ်းသွင်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့အထိ အရှိန်အဝါကြီးမားခဲ့ပါတယ် …
ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်ရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ရီယွန်း ဟာလဲ ဖြောင်းဆိုးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကြိုးဆွဲရာကတဲ့ မင်းကြီး အရုပ်တစ်ရုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် …
တစ်နေ့တော့ ဘုရင်ရီယွန်းမှာ သားတော်တစ်ပါး ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ် … နန်းတော်ရှိ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ ထိုကလေးဟာ စစ်မှန်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်လာနိုင်တယ့် ကံဇာတာနှင့်အတူ မွေးဖွားလာတယ်လို့ သိရပါတယ် …
ထိုမင်းသားလေးကတော့ လီစွန်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ် … အိမ်ရှေ့စံမင်းသားလေး လီစွန်း ဟာ လူမှန်းမသိတတ်ခင်မှာ ဖြောင်းဆိုးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ကြံအဆိပ်ခေတ်ခြင်းကို ကြုံခဲ့ရပါတယ် … ဒါပေမဲ့လဲ လီစွန်းရဲ့ ကံကြမ္မာကြောင့် သေဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ် …
ဒီလိုနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ အိမ်ရှေ့စံ မင်းသားလေး လီစွန်း နှင့် ဂျိုဆွန်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာ အမြစ်တွယ်သလို တွယ်လာခဲ့ပြီး အင်အားကောင်းတဲ့ ဖြောင်းဆိုးအုပ်စုနှင့် အားပြိုင်ပုံကို ရိုက်ကူးပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ် …
စစ်မှန်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းရင်း မင်းသားလေး လီစွန်း ဟာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ချစ်သူတစ်ဦးကိုပါ မမျှော်လင့်ပဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ် … ထိုမိန်းကလေးကတော့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ အမတ်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဂါအွန်း ပါ …
ဒီလိုနဲ့ လီစွန်း ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ချစ်ရသူဖြစ်တဲ့ ဂါအွန်း တို့က ဖြောင်းဆိုးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ အတိုက်အခံလုပ်ရာမှာ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားလေး လီစွန်း ကို ဘယ်လို အကူအညီပေးမလဲ ?? ဖြောင်းဆိုးအဖွဲ့အစည်းကရော ဘယ်လောက်ထိ အင်အားကြီးမားမလဲ ?? နှစ်ဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်မလဲဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
တစ်ပိုင်းကို ကြာမြင့်ချိန် ၃၅ မိနစ်နှင့်အတူ အပိုင်းစုစုပေါင်း ၄၀ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် …
Rating အရ IMDb မှာ 7.5/10 , Viki မှာ 9.6/10 , MyDramaList မှာ 8.9/10 နှင့် AsianWiki မှာ 74% အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ Rating မြင့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်တာနှင့်အညီ ယနေ့ခေတ်ကိုပါ ထင်ဟပ်စေမယ့် dialogues အမိုက်စားတွေပါ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုလို့ recommend ပေးပါရစေ …
Translator : ^Amy^ & Nantthar
Episode 01 ( 270 MB )
Openload Solid Drive
Episode 02 ( 208 MB )
Episode 03 ( 283 MB )
Episode 04 ( 220 MB )
Episode 05 ( 264 MB )
Episode 06 ( 210 MB )
Episode 07 ( 257 MB )
Episode 08 ( 224 MB )
Episode 09 ( 270 MB )
Episode 10 ( 201 MB )
Episode 11 ( 241 MB )
Episode 12 ( 242 MB )
Episode 13 ( 276 MB )
Episode 14 ( 201 MB )
Episode 15 ( 261 MB )
Episode 16 ( 217 MB )
Episode 17 ( 247 MB )
Episode 18 ( 229 MB )
Episode 19 ( 243 MB )
Episode 20 ( 233 MB )
Episode 21 ( 264 MB )
Episode 22 ( 213 MB )
Episode 23 ( 258 MB )
Episode 24 ( 220 MB )
Episode 25 ( 259 MB )
Episode 26 ( 221 MB )
Episode 27 ( 240 MB )
Episode 28 ( 234 MB )
Episode 29 ( 237 MB )
Episode 30 ( 241 MB )
Episode 31 ( 245 MB )
Episode 32 ( 235 MB )
Episode 33 ( 272 MB )
Episode 34 ( 200 MB )
Episode 35 ( 237 MB )
Episode 36 ( 234 MB )
Episode 37 ( 255 MB )
Episode 38 ( 219 MB )
Episode 39 ( 230 MB )
Episode 40 ( 238 MB )
Starring: Go Na-Hee, Heo Jun-ho, Kim Byung-chul, Kim So-hyun, Kim Sun-Kyung, L, Lee Chae-Young, Park Cheol-min, Shin Hyun-Soo, Yoo Seung-Ho, Yoon So-hee,
Trailer: Ruler : Master of the Mask ( 2017 )